Chii chinonzi CMO kana Chief Marketing Officer uye ndeapi mabasa avo? | ECommerce nhau
Wati wambonzwa here kuti chii chinonzi CMO kana Chief Marketing Officer chaicho uye nzira? Zvakanaka, muchikamu chikuru chevashandisi ivo vangangodaro vasingazivikanwe zvachose pfungwa mukunzwisisa kwavo uye izvo zvinogona kukufarira iwe mukuvandudza chiitiko chehunyanzvi chedhijitari. Zvakanaka, iyo CMO kana Chief Marketing Officer iri chaizvo inzvimbo yesimba mukambani iyo kubva kushambadziro inotsvaga pamusoro pezvose gadzira kwenguva pfupi purofiti. Kusvika pakuti zvinoenderana muzviitiko zvakawanda pane mimwe mhedzisiro mukutungamira kwekambani.
Saka, saka, chinzvimbo chehunyanzvi chaungashandisa kubata mukusimudzira bhizinesi chirongwa. Kunyangwe isiri mumabhizinesi madiki edhijitari, kana zvisiri izvo zvinopesana mune izvo zvinopa chimiro chemberi chekutungamira. Kuve mutariri wekuvandudza akateedzana emabasa anozobatsira kwazvo muzuva nezuva kune chirongwa. Kunyangwe asiri ese emabhizimusi mamodheru ane hunhu uhwu ane huvepo hweCMO kana Chief Marketing Officer muchirongwa chekambani.
Nepo kune rimwe divi, zviri nyore kwazvo kuti iwe utarise kubva zvino zvichienda mberi kuti uyu bhizinesi nhamba anofanira kutanga apa ruzivo rwakakura uye kudzidza mukudyidzana kwemadhipatimendi ese ekambani yepamhepo. Nekuti ichaedza kukwidziridza zviwanikwa zvinogoneswa kuita kuti iro bhizinesi chirongwa chive chinobatsira uye chinobatsira.
1 CMO: ndeapi maficha aunofanirwa kupa?
2 Yayo inonyanya kukoshesa mabasa: mamwe acho
3 Mbiri inotumirwa kunze neCMO
4 Zvimwe zviratidzo zvekuzivikanwa nezve kwavo chaiko mabasa
CMO: ndeapi maficha aunofanirwa kupa?
Iye anonzi Chief Marketing Officer haakwanise kuitwa nechero ani. Kana zvisiri, pane kudaro, pane akateedzana ehunyanzvi uye hunhu hwaunofanirwa kupa munhoroondo yako yehunyanzvi. Izvo zvakakosha kuti iwe uvazive kuitira chero chikonzero iwe unofanirwa kuhaya nyanzvi ine mbiri iyi. Chii chinofanirwa kuve neakakosha aya atichataura pazasi:
Anofanirwa kuve mutungamiri akanaka uye anoziva kubata zvikwata zvevanhu zvine hunyanzvi.
Neruzivo rwakazara rwemusika uye zvazvino mafambiro anogadzirwa muchikamu chekutenga zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa.
Kuziva maitiro ekuita kuraira kana kutungamira kwezvikwata zvakanyanya.
Kuve wakanakisa kukurudzira kunowedzera kukosha kune yako nyanzvi kumashure.
Kuziva maitiro ekuchinja kune shanduko dzinoitika mundima yebhizinesi uye kugona kuzviisa mukuita munzvimbo pfupi kwazvo yenguva.
Naizvozvo, ichi chakakosha chinzvimbo chebasa chinoda zano uye chiito muzvikamu zvakaenzana. Zvekuti nenzira iyi, inogona kusimudzira uye kushandisa kudzora uye kukanganisa mune ese maitiro anoenderana nekutengesa mukambani. Hazvishamise kuti, pakupera kwezuva iwe unenge usisina sarudzo kunze kwekutarisana zvakananga nehurongwa hwekutengesa hwekambani. Uye iwe zvechokwadi unofanirwa kuve wakagadzirira kutora aya akakosha mabasa mumadhijitari mabhizinesi. Ehezve, nzira yakanakisa ndeyekubva pachinzvimbo chako seCMO kana Chief Marketing Officer.
Nepo kune rimwe divi, chimwe chikamu chinofanirwa kukosheswa mune iri bhizinesi chimiro ndechekuti inyanzvi yekushambadzira, ine mabasa edirector wekushambadzira uye ane ruzivo ruzivo uye bhizinesi chiratidzo. Chinhu chakakosha sekumisikidza kubudirira kwebhizinesi redhijitari kubva kumasystem akasiyana mukushambadzira kwazvino uye kwehunyanzvi.
Yayo inonyanya kukoshesa mabasa: mamwe acho
Chimwe chezvinhu chinofanirwa kutariswa kubva zvino zvichienda mberi ibasa iro iro iro vanhu vanoshandisa iyi yakasarudzika nyanzvi yekudzidzira vanofanirwa kukudziridza. Tiri kuzokuratidza zvimwe zvakajairika mumakore apfuura.
Hapana mubvunzo kuti kuwedzera kutengesa kwekambani nerubatsiro rwe marketing marketing actions Icho chimwe cheanonyanya kukosha panguva ino. Uye kune iyo iri kodzero yako kushandisa zvese zviripo zviwanikwa zvaunazvo mukambani yedhijitari. Nemabasa akadaro, senge kushambadza uye kushambadzira zviito, kusimudzira kushambadzira kushambadziro pamasocial network kana kuvhura yakasimba SEO zano maringe nezvose zvirimo uye zvemagariro midhiya zviito.
Kurudzira kutaurirana kwemukati
Rimwe rebasa rake riri pamusoro peaya chaiwo mabasa mubasa rake. Iko kunofanirwa kuve kupi chinongedzo chekubatanidza akasiyana madhipatimendi ebhizinesi. Nyanzvi yechokwadi yehunhu uhwu ndeuyo anoziva nzira yekuzvikomberedza nechikwata chinoshanda zvakanyanya maererano nemhedzisiro iri kuzogadzirwa kubva zvino zvichienda mberi. Kuburikidza nechikwata chakasimudzirwa uye pamusoro pezvose zvakabatana zvikuru maererano nezvinangwa zvainoteedzera.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kwazvo kuti ivo vari muchinzvimbo chekuita kongiri yekuita zviitwa mune yega kesi kuzvizadzisa neimwe budiriro. Kufanana nechikurudziro mumapoka avo ebasa uye kuti ivo vanogona kupa kwavo kugona kuita kupfuura makore. Iko iko kuvimba kwekuti vashandi vakasiyana vanofanirwa kuve nako muhunyanzvi uyu hunhu kunofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvikuru mukuita kwavo.
Mbiri inotumirwa kunze neCMO
Chero zvazvingaitika, pane akati wandei maitiro muprofita yako asingakwanise kushayikwa muCMO kana Chief Marketing Officer. Semuenzaniso, izvi zvinotevera izvo zvatiri kuzokupa panguva ino kuti uve nekujekesa zvikuru iyi nyaya yatiri kukutsanangurira.
Kugona kubata zvikwata
Huno hunyanzvi husinga gone kuvepo kune ako ehunyanzvi mamiriri. Hazvishamisi kuti rimwe remabasa aro makuru rinonyanya pamusoro pekubatanidza mabasa ese mukambani. Govera mamwe mabasa kune vaanoshanda navo padyo uye vazhinji vakazvipira kune bhizinesi chirongwa.
Iva nehanya neshanduko dzehunyanzvi
Sezvo zvaisagona kuve neimwe nzira, chirongwa chepamhepo chinofanirwa kuvhurika kune ese mafambiro ari muchikamu uye kana iwe uchiona zvichikwanisika kuzviisa mune zvako kuitira kuti pakupedzisira mhedzisiro yacho ibatsire zvakanyanya kupfuura kusvika zvino.
Zvipire kwazvo kuchirongwa
Kubva pakutanga iwe unozodikanwa kuti ubatanidzwe neyekutengesa zvemagetsi iko iko kwakabatanidzwa. Kuti uwane izvi zvinodikanwa mumakambani epamhepo, hauzove nesarudzo kunze kwekuunza kufarira kukuru pane zvese zvaunoita. Uye kuendesa zano iri kune vamwe vese nyanzvi vanogovana chirongwa chehunyanzvi ichi.
Ruzivo rwakadzika kwazvo
Hunyanzvi hwese hwapfuura hwatambotaura hunenge husina kukosha kana husinga perekedzwe nekubatanidzwa kweakanakisa fungidziro nezve yako kambani. Asi zvakare nezve izvo zvinomiririrwa nepamhepo chikamu mune zvehupfumi nekuti ndiyo nzira yakanakisa yekusimudzira bhizinesi rehunhu uhu.
Pakupedzisira, izvi ndizvo zviongororwa zvinofanirwa kupihwa neCMO kana Chief Marketing Officer kuitira kuti vaite basa ravo nekugutsikana kuzere. Kana iwe ukaona kuti iwe unosangana neiyi nyanzvi profil, usakahadzika kwechinguvana kuti iwewo unokwanisa kuita ichi chihombe chemabhizimusi chakakosha sezvo chiri chitsva panguva imwe chete.
Zvimwe zviratidzo zvekuzivikanwa nezve kwavo chaiko mabasa
MaCMOs, kune rimwe divi, ndiwo mamiririri echisikigo eesangano rakabatanidzwa nekuti vanonzwisisa vatengi kana vashandisi zvirinani kupfuura chero munhu. Asi usakanganwa, zvakare akaomesesa uye anoda nzira dzekutengesa kuti uite. Munharaunda umo iwe unofanirwa kuziva maitiro ekushandisa pamikana yekushambadzira mukambani maunosanganiswa.
Nepo kune rimwe divi, kiyi yekubudirira kweMutungamiriri Mukuru weKushambadzira yakavakirwa pane chimwe chinhu chakakosha sekuva nenzira inoshanda kwazvo kunzwisisa kwakadzama uye kwakadzama kwekuchinja kwesimba kwemusika. Nekuti haugone kukanganwa kuti uri kutarisana nechikamu chinogara chichivandudzwa uye haugone kuramba wakanyarara.
Asi Chief Marketing Officer anoshanda kupi chaizvo? Zvakanaka, zvakanyanyisa mu kutengesa, kushambadzira nekusimudzira madhipatimendi. Nezvinangwa zvakasiyana, senge kuve nechokwadi chekubatanidzwa kwemaitiro ekushambadzira pamadhipatimendi ese ekambani, mune ino kesi digital.
Nezve izvo zvidzidzo zvaunofanirwa kupa mune yako rekodhi rekodhi, vanogona kushambadzira kana kushambadzira. Kunyangwe mune yechipiri kesi iwe unofanirwa kugara uchiunganidza ruzivo rwakadzama nezveazvino kushambadzira mumakambani. Kunze kwerumwe ruzivo rwunogona kuuya nguva dzose kuti ruite mabasa arwo: mitauro, matekinoroji matsva uye wadii wataura imwe pfungwa nezvehupfumi.
Sezvaungave iwe waona, haisi nzvimbo yakajairika, asi zvinopesana zvichangogadzirwa. Uye izvo zvakanyatso kuputika nekusvika kwemabhizimusi edhijitari, sezvazvakaita mukutengeserana kwemagetsi. Nehunyanzvi hwakakosha kwariri sekuratidzwa kwayakaitwa muchinyorwa chino. Ikozvino kungosara kwekutarisa kuti iwe unonyatsofarira kuishandisa pane imwe nguva muhupenyu hwako. Nekuti chiitiko chinogutsa zvizere pane zvaunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEO » Chii chinonzi CMO kana Chief Marketing Officer uye ndeapi mabasa avo?